Imifanekiso yezithombe zokulumbana kwamagesi amabili noma ngaphezulu emaqoqweni ezinkanyezi.Click here for English version
I-DIFF ifuna izicelo zabafundi abenza amafilimu ukuthi bathumele umsebenzi wabo.Click here for English version
Isiphethu International Student Film Festival (i-IISFF) yokuqala, ehlelwa yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu, izokwethulwa ngesikhathi se-Durban International Film Festival (i-DIFF).
LeFestiveli ihlose ukuqhakambisa nokugubha umsebenzi wezitshudeni ezingabenzi bamafilimu angezimpilo zabo ngeso elisha.
Abafundi abenza amafilimu bayanxuswa ukuthi bathumele umsebenzi wabo womzuliswano wokuqala oqala mhla wama-21 kuya kowama-30 wangoNtulikazi wezi-2022. Umnqamlajuqu wokuthumela ngumhla wezi-28 kuNhlolanja wezi-2022. Ukubheka ukufaneleka, imali yokuthumela nokuthumela, bheka i-FilmFreeway ku: https://www.filmfreeway.com/durbanfilmfest.
Indikimba ye-IISFF yakulonyaka ithi Migration, phecelezi ukufuduka. Ukufuduka kufakazela ukuthi ukucasha ebusika, ukuzihlola nokushintsha indlela yokuziphaka kukhona ukuze kuhlengeke impilo.
‘I-Isiphethu International Student Film Festival yokuqala ihlose ukuqhakambisa imbangela yokufuduka nomphumela wakho empilweni yabantu nezinye izidalwa ngokugubha isibindi nokugqugquzela ingxoxo ngemifanekiso nomsindo. Imiphumela emihle izala izindlela ezintsha zokusebenza, yenze abantu ukuthi bafunde futhi basebenzise izindlela ezintsha zokuphila,’ kusho imenenja yomsebenzi uMnu uSakhile Gumede.
I-IISFF izokwethula uxhaxha lwemiklomelo emisha ukukhuthaza nokufukamela intsha enethalente emafilimini, njengemiklomelo Yefilimu Evelele neYomqondisi ovelele.
I-IISFF nohlelo lokucija nesemina kungumyombo wehlelo lwesiphethu kwi-DIFF oluhlose ukufundisa nokuhlomisa abenzi bamafilimu abancane, ukubenza bazethembe nokwabelana ngolwazi lwemboni nolucija intsha.
UNks Thembalethu Shange noMnu Msizi Khoza kwiwebhina yokwabelana ngolwazi yasese-UKZN ngeqhaza nomsebenzi we-Convocation.Click here for English version
‘Ubudlelwano bakho nenyuvesi abupheli mhla usemcimbini wokuthweswa iziqu.’
Lawa kube ngamagama owayengumfundi wase-UKZN uMnu Msizi Khoza kwiwebhina ngomsebenzi wababengabafundi.
UKhoza uyilungu le-UKZN Alumni Network. Ukwi-Convocation Executive yase-University of Johannesburg ne-Principal: Structured Finance e-ABSA Group. Ugcizelele ukuthi ababengabafundi kufanele bahlale benobudlelwano neNyuvesi. ‘Ijoka lesicucu sakho lihambisana nokuthi abantu bayibuka kanjani iNyuvesi’ kusho yena. Ukhuthaze ababengabafundi ‘ukuthi babumbe inamuhla leNyuvesi nekusasa.’
I-Convocation, okuyiyona enkulu ngokuhlanganisa izinhlaka eziningi zase-UKZN, inabantu abaneziqu (zase-UKZN nezikhungo eziyibumbile i-University of Natal ne-University of Durban-Westville), abasebenzi abafundisayo, nabaPhathi beNyuvesi (okukhona iSekelashansela noMphathi noMabhalane Omkhulu), osolwazi asebathatha umhlalaphansi kodwa abasengosolwazi nabasebenzi abafundisayo asebathatha umhlalaphansi.
UKhoza ubalule ukuthi i-Convocation Executive (i-Convex) inamalungu amele abafundi eMkhandlwini, uhlaka oluthatha izinqumo eNyuvesi. ‘I-Convex imele i-Convocation,’ kusho yena. Ugcizelele ukuthi amalungu e-Convex awagcini nje ngokukhethelwa ukuhamba imihlangano kepha futhi nokwenza izinhlelo zabantu ebamele nomphakathi waseNyuvesi wonkana.
Kubaluleke kakhulu ukuqoka abantu abafanele ukubaqokela e-Convex. UKhoza uphakamise ukuthi amalungu e-Convex kufanele abe nezimpawu ezinjengentshisekelo, ubunceku (ukufisa ukushiya into isesimwemi esingcono kunaleso osishiye ikuyona), namakhono nemibono okwehlukene.
Wengeze ngokuthi uMengameli kufanele ‘i-Convocation ayibeke ezingeni eliphezulu, ayenze ibe yinto yezinto ezinhle eNyuvesi.’ Ugcizelele ukuthi ozongena kulesi sikhundla kufanele abe qotho, wengeza ngokuthi ‘Sidinga umuntu esizozwana naye ofana nathi kodwa abe ngcono kunathi.’
Umphathi wohlelo nowayengumfundi wase-UKZN uNks Thembalethu Shange uthe iphutha abantu abajwayele ukulenza lokucabanga ukuthi umuntu uba yilungu le-Convex ngoba ake aba yilungu Lomkhandlu Wabafundi awusilo iqiniso.
UKhoza uthe i-Convex yase-UJ ibeka izinjongo-ngqangi zesikhathi sayo isebenza. Kuzona kukhona ukungaqashwa kwabantu asebethweswe iziqu nokubumba izinhlelo zehhovisi lababengabafundi baseNyuvesi ngenhloso yokuba neqhaza ezinqumweni zoMkhandlu ukulungisa izindaba ezimqoka zababengabafundi nabafundi. I-Convex ifunela izindawo ezihlala abafundi besifazane abenza unyaka wokuqala imali yokubhekana nezinselelo zokuphepha kubafundi bonyaka wokuqala.
Wengeze ngokuthi: ‘I-Convocation idinga ukuba yinjini emikhankasweni yeNyuvesi yokuhlwaya imali’, wathi amanyuvesi ekhethelo njenge-Harvard ne-Stanford aphumelela ngenxa yeminikelo yezitshudeni ezindala nobudlelwano obungapheli.
UNks Shange ubonge uKhoza ‘ngolwazi lwakhe olumqoka’ nge-Convocation, wabonga i-UKZN ngokumnika inkundla yengxoxo. Ukhuthaze zonke izitshudeni zakudala ukuthi ziphose esivivaneni ukuthuthukisa Isikhungo nokuvota okhethweni lwe-Convocation.
Enanela okushiwo wuNks Shange, uMqondisi Omkhulu weZokuxhumana e-UKZN uNks Normah Zondo unxuse ababengafundi ukuthi bahlale bexhumene neSikhungo ngoba baneqhaza elimqoka elifana nokwakha nokukhulisa igama leNyuvesi ngamagalelo abo emphakathini. Unxuse ababengabafundi ukuthi bangene emhlangweni ozayo i-Convocation AGM, ozoba sezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje mhla we-19 kuLwezi.
Ukubheka lewebhina yokuxhumana, ciphiza lapha lapha.
Amagama neziThombe: wu-Raylene Captain-Hasthibeer
Kusuka kwesobunxele: UNks u-Nitasha Pillay, uMnu u-Nathan Pillay, noMnu u-Jirah Moodley we-Tagged AI ophume isibili kwi-Youth Innovation Challenge Awards ebise-Botanical Gardens mhla we-10 ngoLwezi wezi-2021.Click here for English version
Ithimba labafundi base-UKZN elikhaliphile nelikhuthalele ukusebenzela umphakathi liphume endaweni yesibili kwi-@021 Youth Innovation Challenge (i-YIC) ehlelwa yi-Innovate Durban. Kulomqhudelwano bekukhona abantu abangama-60 namathimba angama-23 akuyona yonke iKwaZulu-Natali ukudingida isihloko sakulonyaka esithi: Response to Crisis.
I-Innovate Durban (i-RF) NPC yinkampani engenzi nzuzo eyasungulwa ngonyaka wezi-2017 ukuthi ibe yindlela yokuthi uMasipala waseThekwini alekelele ngayo ukweseka izinto ezintsha, abantu abenza izinto ezintsha ngezinhlelo, ucwaningo, ukuqeqesha nokuthuthukisa amakhono.
I-YIC wuhlelo olukhulu lwe-Innovate Durban. Ihlose ukucija intsha ngezindlela ezintsha zokwenza izinto ukubhekana nezinselelo zemiphakathi namabhizinisi endawo. Endleleni okwenziwa ngayo kucijwa intsha, iqeqeshwe kwi-coding, ukukhangisa ngamabhizinisi ayo nokukhombisa ukuxazulula izinkinga ngokuhlanganyela.
Ithimba lase-UKZN beligxile kwi-Sustainable Development Goal (SDG) 11 yeNhlangano Yezizwe, ethinta amadolobha nemiphakathi okuchumayo. UNks u-Nitasha Pillay, uMnu u-Jirah Moodley noMnu u-Nathan Pillay akade bengamalungu ethimba elibizwa ngokuthi yi-Tagged AI (Artificial Intelligence) benze ubuchwepheshe bokuvikela izingane nokunqanda ukushushumbiswa kwabantu.
Lelithimba liwine umklomelo ongamaR25 000. Lizoxhaswa yi-Innovate Durban unyaka ukuphucula nokwethula ubuchwepheshe balo. Ngaphezu kwalokho uNks Pillay uklonyeliswe ngeZutari Woman in Design Award ‘ngomsebenzi wakhe, intshisekelo, umqondo obukhali nokukhuthala ezinkundleni’ ze-YIC.
Umholi we-Tagged AI leader nongumfundi weSayensi Yamakhompiyutha owenza unyaka wokugcina Moodley uthi kumqoka ukuthi intsha ibambe iqhaza ekuqhamukeni nezisombululo uma kunezinselelo. ‘Intsha yaseNingizimu Afrika iyikusasa lezwe lethu. Uma yonke intsha ingabamba iqhaza ekucabangeni izinto ezintsha zokuxazulula izinselelo zeNingizimu Afrika, izwe lethu lingathuthuka libe nekusasa eliqhakazile,’ kusho yena.
Umfundi owenza unyaka wesithathu kwi-BCom Marketing and Information Systems uNks Pillay wangenela umqhudelwano ngoba sifuna ukushintsha umhlaba nokukhuthaza abanye abantu. ‘Ungazithambisi uma uhlangana nezinselelo kodwa uzibambe ziqine,’ kusho yena.
UNks u-Pillay, oyimenenja yomsebenzi e-Enactus UKZN, ne-Peer Academic Mentor e-UKZN ne-Youth Ambassador for Women in Tech South Africa, uthe ubuchwepheshe yisikhali esinamandla emphakathini wanamuhla. ‘Kusukela ngisemncane ngangihlale ngibamba iqhaza ezinselelweni ezazingenza ukuthi ngicabange ngendlela ehlukile. Ngenkathi sengifunda iBanga 7, ngabamba iqhaza emqhudelwaneni i-First Lego League robotics. Kade ngaba nothando nenhliziyo yokwenza izinto ezintsha nokuba negalelo ngomsebenzi wami. Ngikholwa wukuthi uma unikela umsebenzi wakho kuNkulunkulu, uba yisisekelo semicabango nemibono yakho.’
Umfundi owenza unyaka wokuqala we-BSc Computer Science uMnu Pillay (ongumfowabo ka-Nitasha) wangena kwi-YIC ukuzivivinya. ‘Ngithanda izinselelo ezintsha, ikakhulu ezithinta ubuchwepheshe. Zivivinye ukuze ukhule nsuku zonke. Khumbula ukuthi ukukhula kuqala ngosuka lapho ukhona,’ kusho yena.
‘Nginothando olukhulu lobuchwepheshe. Lomqhudelwano ungifundise amakhono amaningi nezindlela zokubhekana nezinselelo, ngiqhamuke namaqhinga amasha,’ kwengeza uMnu u-Pillay. ‘Kungenxa yokungazithambisi, uthathe indawo yakho, wenze ushintsho.’
Kulomqhudelwano ithimba lihambele ithimba esigcwawini sokucobelelana ngolwazi ngesikhathi sekhefu langoMandulo lapho lafunda khona ngokudweba, ubunikazi bomsebenzi, ukubaluleka kwama-SDGs nokuxazulula izinkinga. ‘Ngahlangana nabasunguli bezinto abavelele nabaanomdlandla. Angikuzwakalanga kuwumqhudelwano ngoba wonke amathimba ayenombono wokwenza ushintsho ngezisombululo zawo,’ kusho uNks u-Pillay. Yena no-Moodley bawina imiklomelo emcintiswaneni okubuzwa imibuzo kuwona.
Nakuba ikhono labo lokukhuluma elisezingeni eliphezulu lenza kwabukeka kulula, ithimba libhekane nezinselelo eziningi njengokuba nethuba lokubhala izivivinyo nokwenza eminye imisebenzi yesikole. ‘Ukuthola ubuchwepheshe obudingekayo bekungumqansa omkhulu. Ngemva kocwaningo, saqhumuka neqhinga, sathola i-hardware ngemali encane,’ kusho u-Moodley.
Ithimba libonge bonke abalesekile ngesikhathi somqhudelwano othathe inyanga yonke. ‘Sibonga ngokukhethekile uMnu Kyle Bryce Khedun (owenza unyaka wesithathu kwi-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) ngokusisiza esigabeni sokucabanga umdwebo. Sibonga umdidiyeli wase-UKZN uMnu Joash Govindsamy (umsunguli we-Green Gold Technology nowawina kwi-2016 Youth Innovation Challenge) ngokucathulisa wonke amathimba ase-UKZN.’ Babonge ne-Innovate Durban nethimba okukhona kulona uNks Susanne Ramsunder (uMholi) noMnu Sakhiwo Rewu.
UNks noMnu u-Pillay babonge abazali bako u-Pam no-Terence Pillay ‘ngokuseseka, nokuhlale bevivinya indlela esicabanga ngayo nangokusikhulekela.’
Ithimba lase-Durban University of Technology liphume phambili ngomsebenzi walo wemisubelo yabantu besifazane eyonga imvelo, kwathi abafundi baseMangosuthu University of Technology baphuma isithathu nge-App yokuthi izivakashi zalapha ekhaya nezaphesheya ngokusebenzisa izinto zokuthutha umphakathi eziphephile.
Kubehluleli kowamanqamu bekukhona:
U-Aurelia Albert, isikhulu esiphezulu se-Innovate Durban
U-Justice Matarutse waseThekwini Municipality
U-Vishen Pillay we-Adams & Adams
U-Shaun Tait we-Domini Foundation
U-Richard Ahlschlager we-Zutari
Izithombe: yi-Innovate Durban neZithunyelwe
Akade bekwisimpoziyamu, kusuka kwesobunxele nguSolwazi Sandile Songca, uDkt Lolie Makhubu-Badenhorst, uMnu Njabulo Manyoni, uMnu Luke Vorster, noMnu Chee Wai Mak.Click here for English version
I-Biennial Language Research Symposium yesine ebihlelwe yiHhovisi Lokuhlelwa noKuthuthukiswa KoLimi eNyuvesi yenziwe ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje.
Inhloso yesimpoziyamu wukuqhakambisa nokuthuthukisa izilimi zomdabu, ikakhulu isiZulu.
Isimpoziyamu, esihloko sithi: The Development of Innovative Applications in African Languages: Efficacy and Innovation, ibinesikhulumi esiqavile uMnu u-Chee Wai Mak wase-Western Digital Storage Technologies e-Thailand.
Enkulumweni yakhe yokwemukela abantu iPhini leSekela-Shansela leZokufundisa noZokufunda uSolwazi Sandile Songca ugcizelele ukuthi ukuqhakanjiswa kwezilimi zomdabu akufanele kube ngumsebenzi wesilungu kodwa kufanele uholwe ngabanikazi bazo izilimi.
Ekhuluma ngesihloko esithi Fourth Industrial Revolution (i-4IR) in Relation to Language from an Application Perspective, u-Wai Mak uthe: ‘Kumqoka ukukhumbula ukuthi zonke izilimi, okubala nezilimi zomdabu, zineqhaza elikhulu ekuthuthukiseni, ekuhleleni nasekusebenziseni i-4IR.’
Ubalule ukuthi i-1IR eyenzeka ngeminyaka ye-1800s eyayigxile ekusebenziseni imishini ukukhiqiza izinto, i-2IR ngeminyaka ye-1900s eyaholela ekukhiqizweni kwezinto eziningi, i-3IR ye-1970 eyayigxile ekukhiqizenis ngemishini ezishintshayo ne-4IR esebenzisa imishini ezithathela izinqumo.
U-Wai Mak ubuyekeze ukuxhumana phakathi kolimi nokucabanga, wachaza ukuthi kudingeka inkulumo ukuze igama kube khona elikushoyo, kanti kudingeka ukucabanga ukuze lisho into ethile. Ecubungula ukusebenza kolimi nezinhlangano, uthe ‘ulimi lungachazwa njengohlelo lokuxhumana nokucabanga olusebenzisa imifanekiso, izifengqo nolimi.’
Udingide abantu abasebenzayo nomehluko phakathi kokwabiwa komsebenzi ne-4IR ekuhlanganisayo. U-Wai Mak ugxile ekuthuthukiseni amakhono ehlukene ukuze kufundeke ngemishini, wengeza ‘ukuhlaziya izindlela ezihlukene zolimi, amagama nenkulumo kudingeka sigcizelele emhlabeni wonke ukuthi uhlelo, ulimi, izifengqo nemifanekiso kumqoka kakhulu uma sizama ukukusebenzisa kwi-4IR.’
UDkt Ashley Subbiah, obhekele ezokutholakala kolwazi oPhikweni Olweseka Abakhubazekile e-UKZN, ukhulume ngokuthi iNyuvesi isikuphi ngokusebenzisa uhlaka lobuchwepheshe bomsebenzi wolimi lokukhuluma ngezandla i-South African Sign Language (i-SASL). Ebalula iqhaza loPhiko ekwesekeni izitshudeni ezinokukhubazeka okwehlukene nokuthi zitholani kulezizinhlelo, wengeze ngokuthi iNyuvesi iqashe otolika abakhuluma ngezandla abayisithupha.
U-Subbiah uphawule ngokwanda kwesibalo sokubhalisa kwezitshudeni eziyizithulu, wathi kumanje zili-11 ezibhalise ezimpikweni zontathu zeNyuvesi. Ethinta izinselelo zobungcweti nezokufunda ezibhekene notolika, ngenxa yolimi olusathuthuka, ubalule ukuthi ukufunda ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje kwenza otolika bakwazi ukuthola izinto zokufundisa nezokufunda. Wengeze ngokuthi usizo lokutolika litholakala enkundleni i-UKZN Moodle/LEARN 2021 site, o-PowerPoints abanamakhodi e-SASL, izifundo ezibukhoma ezitholakala ku-Zoom naku-WhatsApp abhaliwe nangamavidiyo.
UMnu uNjabulo Manyoni weHhovisi LezokuHlelwa noKuthuthukiswa KoLimi eNyuvesi nobengumphathi wohlelo ubeke izindlela ezixhumanayo zamatemu nezincazelo zamagama esiZulu. Uthe ukwenza amatemu, okungenye yezindlela zokuthuthukisa ulimi, kunezigaba ezinhlanu okungukuvuna, ukudingida, ukuhlola, ukwenza kujwayeleke nokusabalalisa.
Ebalula ubumqoka bezichazamazwi nokusetshenziswa kwazo ekuqondeni ulimi oluvamile nolokusebenza, uthinte uHlelo Lwezilimi lwase-UKZN oluqhakambisa ukusetshenziswa kwesiNgisi nesiZulu, wabalula ukuthi ‘izichazamazwi zezilimi ezimbili ziyakwazi ukufeza izidingo zezilimi zombili’.
UDkt Lolie Makhubu-Badenhorst, Umqondisi Obambile eHhovisi Lokuhlelwa noKuthuthukiswa Kolimi eNyuvesi ukhulume ngokwenziwa kwesichazamazwi sezilimi ezintathu iMandarin, isiNgisi nesiZulu okulula ukusisebenzisa, esisadidiyelwa ngenxa yokubanjezelwa wubhubhane i-COVID-19.
Eveza isampula lesichazamazwi, uthe inhloso yaso wukufundisa abantu abasisebenzisayo lezizilimi zontathu nokubelekelela ngesidingo noma inking ethile.
UMnu Luke Vorster, umcwaningi nomfundisi waseSikoleni seZibalo, i-Statistics neSayensi yamaKhompiyutha, uvale isimpoziyamu ngokubonga izethameli zonke nesikhulumi esiqavile u-Wai Mak. Ubonge iHhovisi Lokuhlelwa nokuThuthukiswa KoLimi eNyuvesi, uPhiko LwezokuXhumana ne-Information and Communications Services Division ngokuhlela lesimpoziyamu.
Ezinye izihloko ezidingidwe kwisimpoziyamu bekungukwenza isiZulu ulimi lwezifundidwa ezikhungweni zemfundo ephakeme, ukubaluleka kolimi kwi-4IR, ucwaningo lwe-Bua Le Nna; izindlela ezisetshenziswa ekuhumusheni i-UKZNdaba Online, i-Python computer programming nemibono yabantu ngokusetshenziswa kwesiZulu Termbank Technology.
Ukubuka iwebhina, ciphiza lapha.